Soosaarayaasha iyo Warshada ugu Wanaagsan ee Soodejinaya Dhalooyinka |Ipanda
1 Ma jiraan qaybo beddela, oo ku habboon cabbir badan oo dhalada dhalada ah oo madhan iyo daasadaha pop, ayaa ah qalabka khadka wax soo saarka ee ugu habboon.
2 Waxay qabataa beddelka soo noqnoqda, xawaaraha lagu hagaajin karo sida looga baahan yahay macmiilka iyada oo loo marayo guddiga.
3 Inuu awoodo inuu ku xidho khadka wax-soo-saarka buuxinta oo dhammaystiran.
4 Waxay qabataa tayada sare ee birta 304 ee alaabta, la kulanta heerka cuntada, waxay leedahay cimri dheer.
5 qaab-dhismeed fudud iyo hawlgal ku habboon, oo leh guddi koontarool oo leh calaamad buuxda oo Ingiriisi ah oo ku ag taal mashiinka.
6 Nooca Centrifugal, oo leh shaqeyn ka-hortagga cuncunka, taageero lagu hagaajin karo khadka buuxinta ee kala duwan.
7 Faa'iidooyinka ciribtirka foosha, hagaajinta waxtarka
Hore: Dhalo Toos ah uncrambler
Xiga: Dhalo Xawaare Sare Oo Toomaati ah
Dhalo wareeg ah oo buuxa oo toos ah oo kala soocida unscramblin...
Mashiinka Buuxinta Saliida mashiinka buuxinta malab Mashiinka buuxinta malabka oo toos ah Mashiinka Buuxinta Tuubbada Bistoon mashiinka buuxinta saliidda cuntada Mishiinka buuxinta dareeraha tooska ah